Lalao otak 🥇 milalao an-tserasera maimaim-poana amin'ny Emulator.online
Lalao Brain. Mamolavola fisainana lojika amin'ny alàlan'ny Lalao Brain dia zava-dehibe. Tsy vitan'ny hoe manampy anao hahazo vokatra tsara amin'ny resadresaka amin'ny asa na amin'ny fanadinana any amin'ny oniversite izany, fa nanampy betsaka tamin'ny fitazomana ny ati-doha koa, fanatsarana ny fitadidiana, ary hanamora ny fanatanterahana asa tsotra .
Raha mieritreritra ianao fa tsy nampiofana ny atidohanao nandritra ny fotoana kelikely dia tokony hanomboka hanao izany ianao. Tokony ho fantatrao fa azy ireo fahaizana mandroso sy mianatra mijanona mandra-pahatapitry ny fiainana, ka tsy mbola tara ny fampiofanana ny fisainanao.
BrainGames: ahoana no filalaovana tsikelikely? 💡
Milalao checkers an-tserasera maimaim-poana, fotsiny araho ireto torolàlana manaraka ireto :
dingana 1 . Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana mankany amin'ny Emulator.online lalao tranonkala.
dingana 2 . Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Mila tsindrio fotsiny ianao Play ary afaka manomboka milalao ianao.
Dingana 3. Ireto misy bokotra mahasoa. Ianao dia afaka " Manampy na esory ny feo ", namely ny" Play "bokotra ary manomboka milalao, azonao atao" Pause "Ary" Haverina velomina "na oviana na oviana.
Dingana 4. Ataovy ao an-tsaina hatrany ireo karatra fa tsy maintsy avy amin'ny mpivady iray ihany izy ireo. Tapitra ny lalao rehefa vitanao ny manangona ny karatra rehetra. Raha vantany vao vita ianao dia handalo ny haavony mandra-pahavitanao ny lalao.
Lalao atidoha, na lalao mandresy lahatra , dia lalao mandrisika sy mampirongatra ny fisainan'olombelona lozika mba hahitana fanatanterahana tsara.
Ireo lalao ireo dia manana ny mampiavaka azy ny fampivelarana ny lafiny misaina ny olombelona, fanaovana ny mpampiasa tsy maintsy mampiasa, amin'ny lafiny lehibe, ny lafiny ara-tsaina mba hahatratra ny vahaolana marina.
Ireto lalao fandresen-dahatra ireto dia ampiasain'ny therapists. Samy ho an'ny torohevitra ara-pitsaboana, ao anatin'ny mazàna amin'ny trano onenana, ireo zokiolona dia manatanteraka ireo fanazaran-tena mba hialana amin'ny aretina.
Ohatra amin'ny Game Brain ao anatin'izany crosswords, teny Puzzles, ankamantatra, Sudoku Puzzles ary lava sns.
Soa azo avy amin'ny lalao lalao amin'ny ati-doha🤓
Tena mahasoa ny fampiasan-tsaina. Araka ny fanadihadiana, azo antoka ny fanazaran-tena amin'ny fampiofanana ho fahatsiarovana dia afaka mampitombo ny "fikorianan'ny saina". ny fahaizana misaina sy mamaha olana vaovao.
Misy maody lalao roa ho an'ny Lalao Brain. Misy olona lalao sy kilalao vondrona.
Lalao ho an'ny ati-doha mandrisika ny lojika, famakafakana, fisainana visuospatial, fandrindrana ny motera, fahatsiarovana miasa ary fisainana ivelany.
Rehefa milalao irery ny olona iray dia miaina fotoana fohy hijerena azy ireo ary hampiasan'izy ireo ny herin'ny fandikana sy famahana olana . Amin'izay fotoana izay dia manana fahaizana mamorona rafitra fandinihana sy fiainana azo ampiharina ianao.
Lalao iraisana , ho azy ireo, manahafa ny toe-javatra mifaninana sy / na fiaraha-miasa , mampihatra ny fahaiza-manao rehetra voalaza etsy ambony, ankoatry ny fifandraisana eo amin'ny samy olona.
Ankehitriny rehefa fantatsika ny tombony azo avy amin'ny fisainana mavitrika dia tsara kokoa izany ampidiro amin'ny fanazaran-tena ataontsika isan'andro ny fanazaran-tena amin'ny lalao Brain Game handray soa amin'ireo fanatsarana rehetra ireo ary hahazo saina lehibe kokoa.
Karazana lalao amin'ny ati-doha 💡
Ny lalao dia noforonin'ny American Howard Garns ary manampy ao amin'ny fanofanana ny fanjohian-kevitra matematika lojika, fifantohana ary drafitra . Afaka mahita izany amin'ny Internet na amin'ny magazine ianao.
Ny filalaovana fanamarinana dia mahatonga antsika manaova hemisfera ati-doha . Ny psikology sy ny neurobiologists dia nandinika ny fomba hanampian'ny lalao paikady ny fiasan'ny ati-doha, ary hita fa ny filalaovana fanaraha-maso dia mahatonga ny olona marobe ao amin'ny faritry ny ati-doha hihetsika, izay manampy koa hisorohana ny Alzheimer.
Avy amin'ireo mpamorona ny Angry Birds ihany, ny lalao Alex mahagaga dia mamporisika ny mpampiasa azy mampivelatra ny fahaizany stratejika mba hamahana ireo olana naroso ary handalo ny lampihazo.
Ao amin'ity lalao ity ny mpampiasa dia manana iraka hampifandray ireo fantsona amin'ny loko mitovy ary hamorona filaharana. Misy fanamby maromaro amin'izany fanampiana amin'ny fanjohian-kevitra, famahana olana, fahakingana ary fifantohana.
Lalao taloha izay mbola mahavita manintona mpilalao erak'izao tontolo izao. Tsotra ny vinavina: afaka mamorona teny eo afovoan'ny korontana litera tampoka . Ho fanampin'ireo kinova natao pirinty tamin'ny magazine, azo atao ny mahita ny lalao ho an'ny kinova finday.
Heverina ho fanatanjahan-tena, échec manatsara ny fisainana, ny fahaiza-mamorona, ny fampivelarana ny fahaiza-manao ara-tsosialy, kognitika ary fifandraisana . Ankoatr'izay, mpiara-miombon'antoka manan-danja amin'ny fampiofanana amin'ny ati-doha ny lalao. Ny lalao dia azo lalaovina ara-batana na an-tserasera amin'ny tranokala lalao sy lalao chess.
Amin'ireto lalao Brain ireto dia azonao atao ny mampiofana ny sainao ary afaka miatrika olana ara-lojika tsara kokoa, na amin'ny fanadinanao na fotsiny satria te hitazona ny sainao ho endrika tsara ianao.
Fitsipika momba ny lalao amin'ny ati-doha📏
Ny lalao lojika dia tsy manana fitsipika iraisan'ny rehetra, ny tsirairay dia lalaovina miaraka amin'ny fitsipiny manokana, saingy misy zavatra iraisana.
Isika dia mila ampandehanana ny fahalalana kognitika toy ny fandinihana, fanekena, famantarana, fampitahana, toerana. Ary mampiasa fanjohian-kevitra lojika, fandrindrana mialoha, fandraisana fanapahan-kevitra ary na intuition aza afaka milalao tsara ny lalao sy mahay.
amin'ny maha- ohatra amin'ny Lalao Brain azontsika atao amin'ny «échec» . Raha mamaky ny lalàna mifehy azy isika, ny fivezivezena manokana, ny paikady izay azo arahana hanonganana sombintsombiny amin'ny fahavalo ary hiafara amin'ny famonoana ny Mpanjaka, dia azontsika atao ny mamantatra ny fahasarotan'ny karazana fialamboly ao an-tsaintsika.
Torohevitra momba ny lalao amin'ny ati-doha 🤓
Ny lalao lojika dia mametraka fanamby amin'ny atidohantsika, ary na ny faharetantsika aza. Rehefa misafidy lalao Brain, atombohy amin'ny lalao tsotra izay mihantsy ny sainao.
Tsotra nefa mahafinaritra lalao fahatsiarovana . Atombohy amin'ny fitadidianao ny toerana sy ny fanaovana sarina karatra vitsivitsy, ary ampitomboy ny isa rehefa mihabe ny fahaizanao mihazona. Ankoatra ny valisoa dia a lalao ho an'ny sokajin-taona rehetra , mba hahafahanao milalao amin'ny zanakao.
Ny iraka lehibe ataon'ireto lalao ireto dia mahafinaritra, satria amin'ny fialamboly anao dia hahatonga ny sainao tsy ho reraka haingana izy ireo ary ny fahaiza-manao Mety hitranga ireo olana ireo mandroso , tsy tsapako akory.
Araraoty ny tombony maro omen'ny Brain Games ary mifalia amin'ny lalao an'arivony ao amin'ity fianakaviana ity.
Inona no andrasanao hamelezana ny lalao?